इ बाट इलिफेन्ट - Pahilo News
हात्ती अर्थात् इलिफेन्टलाई धर्तीको शक्तिशाली जनावर मानिन्छ । एक नेतृत्वकर्तालाई शक्तिशाली केले बनाउँछ ? त्यो त्यही हो, जुन इलिफेन्टको सुरुको अक्षर अर्थात् ‘इ’ मा आउँछ– एनभिजन, एनेबल, एम्पावर, एनर्जाइज ।
हामी धेरैजसो त्यस कुरालाई लिएर आशंकित हुन्छौं कि, दोस्रा व्यक्ति हाम्रो प्रविधि अपनाउनेछन् । यही कुरा सोचेर हामी प्रायःजसो आफ्नो कार्ड खेल्ने समय त्यसलाई आफ्नो अवस्थासँगै लुकाएर राख्छौं । म पहिला धेरै नै स्वार्थी र एक असुरक्षित व्यक्ति थिएँ, जो प्रायःजसो आफूले गरेका कामका लागि श्रेय लिन चाहन्थे र आफ्नो तरिकालाई छिपाएर अँध्यारोमा राख्न चाहन्थे । यद्यपि मेरो एउटा सपना थियो कि, म प्रभावशाली व्यक्ति बनँु । तर, म आफ्नो असुरक्षामा पूरै घुलेका थिएँ ।
‘कुनै पनि व्यक्ति महान् व्यक्ति बन्न सक्दैन, जो सबै काम आफूस्वयम् गर्न चाहन्छन् र आफूले गरेका सम्पूर्ण कामको श्रेय पनि ऊस्वयम् लिन चाहन्छन् ।’
लामो समयदेखि मलाई यो कुरा यकिन हुन थालेको थियो कि, म मध्यम वर्गीय परिवारका व्यक्ति हुँ र जीवनमा कुनै नयाँपन आउन सक्दैन । संयोगले मेरो संगीत वर्गीज (भारतका प्रबन्धन विश्लेषक) सित एमबिएको पहिलो वर्ष भेट भयो । उनी साधारण र सरल देखिन्थे । तर, उनी आफूलाई धेरै विशेष बनाउन सक्थे र उनीसित जब तपाई हुनुहुन्छ, तपाईलाई त्यस्तो महसुस हुन्थ्यो । म उनको मार्गनिर्देशनमा एमबीएको अन्तिम प्रोजेक्ट गरिरहेको थिए“ । र, केही सप्ताहमै मैले उनका साथीहरु र सहयोगीहरुलाई जान्ने मौका पाएँ । म उनका साथी र सहयोगीहरुबाट उनलाई मिलेको सम्मान देखेर दङ्ग परेको थिए“ । धेरैजसो व्यक्ति यो कुरा मान्दथे कि, यदि तपाईलाई कुनै समस्या परेको छ भने संगीतलाई भेट्नुस् । मलाई यो कुरा धेरै आश्चर्यमय लाग्यो । मैले उनलाई नजिकबाट अवलोकन गर्न सुरु गरँे, किनकि म यो कुरा थाहा पाऊ– ती व्यक्तिमा के त्यस्तो विशेष गुण छ ?
विस्तारै–विस्तारै मलाई थाहा भयो, कुनै व्यक्ति उनीकहाँ आउँछन्, उनी तिनीहरुमा थोपा–थोपा गरेर आत्मविश्वास भरिदिन्छन् । उनी ती मानिसहरुलाई के विश्वास दिलाउँछन् भने उनीहरु आफ्ना सम्भावनालाई पूर्ण रुपले प्रयोग गरिरहेका छैनन् । र, उनी ती मानिसहरुलाई आफूमा रहेको सम्भावनालाई पूरै प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्दथे । उनी आफूसित सहायता माग्नेहरुलाई मात्र होइन, आफूनिकटका व्यक्तिहरुमा पनि सकारात्मक तरङ्ग प्रवाहित गर्दथे, जसले उनीहरुमा ऊर्जा भरियोस् । उनी व्यक्तिहरुमा गुण विकसित गर्दथे र ती गुणहरु बाहिर निकाल्न मद्दत पु¥याउँथे । त्यही कारण हरेक व्यक्तिले उनलाई सम्मान गर्दथे र अरु व्यक्तिहरु त्यही गर्दथे, जुन उनी गर्दथे । उनी कहिल्यै पनि स्व–सन्तुष्टिको भावनाबाट पे्ररित रहेनन् । उनी सधैँभरि एउटै नीतिको अनुशरण गर्दथे– ‘तपाईले आफ्नो स्थितिभन्दा धेरै आफ्ना व्यक्तिहरुलाई माया गर्नुपर्दछ ।’
यी सबै कुरालाई नजिकबाट देखेपछि मैले आफ्नो असुरक्षालाई मेटाएँ र नेतृत्वको बयलगाडीमा कुद्न सक्षम तुल्याएँ । यो कुरा भन्न मलाई धेरै अप्ठेरो हुन्छ कि, म बोस हँु । तर, आफ्नो वास्तविक स्थिति जान्नका लागि यी प्रश्न सोध्नु आवश्यक छ ः
१ के तपाई आफ्नो स्थितिभन्दा धेरै आफ्ना व्यक्तिहरुलाई माया गर्नुहुन्छ ?
२. तपाई आफ्ना व्यक्तिहरुलाई बलिया र सक्षम बनाइरहनुभएको छ ?
३ के तपाई यति सुरक्षित हुनुहुन्छ, दोस्रो व्यक्तिलाई सुनिश्चित महत्वपूर्ण काम दिन सक्नुहुन्छ ?
४. के तपाईमा आफ्ना व्यक्तिमा विशेषता देख्ने क्षमता छ ?
नेतृत्वको अर्थ त्यस पद वा स्थिति होइन, जसमा तपाई हुनुहुन्छ । त्यसको अर्थ हो, तपाई कति राम्रो तरिकाले आफ्नो समूहलाई असम्भवको सम्भव बनाउनका लागि ऊर्जावान् बनाउन सक्नुहुन्छ ?
(लेखक भारतका चर्चित प्रबन्धन विश्लेषक हुन्)